Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu rinoti riri kufara kuti vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Gabriel Magombeyi, vakawanikwa vari mupenyu neChina manheru.
Sangano reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti kunyange haro riri kufara kuti Dr. Magombeyi vapenyu mushure mekupambwa nevanhu vasiri kuzivikanwa, riri kukurudzira zvikuru hurumende kuti iferefete zvakadzama zvakapa kuti Dr. Magombeyi vapambwe, uye vakavapamba vacho vamiswe pamberi pematare edzimhosva.
Mutauriri weZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vanoti Dr. Magombeyi vane kodzero dzekuti kodzero dzavo dzichengetedzwe.
Dr. Nyamande vanoti pari zvino Dr. Magombeyi vari kuongororwa navana chiremba vavo, uye vanofanirwa kupihwa kodzero dzavo dzekuti vambove vega panguva iyo vanenge vachiongororwa navana chiremba.
Dr. Magombeyi vakapambwa nemusi weMugovera wapfuura nevanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani.
Hurukuro naDr. Fortune Nyamande
Kuwanikwa vari vapenyu kwaitwa Dr. Magombeyi kwatambirwawo nemufaro nesangano revarairidzi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, VaObert Masaraure, vanoti vatambira nemufaro kuwanikwa kwakaitwa Dr. Magombeyi vari vapenyu.
Asi VaMasaraure vanoti kunyange hazvo Dr. Magombeyi vawanikwa vari mupenyu, sangano ravo richaenderera mberi nekuramwa mabasa nepamusana pekuti mari dzavari kutambiriswa, hadzisi kukwanira varairidzi.
Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyathi, vati ichokwadi kuti Dr. Magombeyi vari kuongororwa navana chiremba vehurumende pamwe navana chiremba vavo ivo Dr. Magombeyi, kuitira kuti vaonekwe mamiriro akaita hutano hwavo.
VaNyathi vatiwo Dr. Magombeyi havasi muhusungwa sezviri kuburitswa mumadandemutande akasiyana siyana. Asi vati kana Dr. Magombeyi vapedza kuonekwa navana chiremba, uye kana vava kunzwa zvakanaka, mapurisa achida kuzovabvunzurudza kuti chii chakaitika kwavari apo vaive muhunhapwa.